स्क्र्यापबुकिङ - एल्बम कभर hendmeyd
विवाह - जोडे लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक हो। त्यसैले, यो को स्मृति धेरै वर्ष को लागि राखिने छ।
उत्सव को, खुसी उज्ज्वल, वा अनपेक्षित क्षण देखाउन फोटो राम्ररी भण्डारण गर्नुपर्छ। आज धेरै लोकप्रिय सुन्दर छ विवाह एल्बम Handmaiden।
निस्सन्देह, जवान वरदान फोटो एल्बम आफ्नै हातले बनाएको प्राप्त गर्न ठूलो खुशी हुनेछ। यस्तो आश्चर्य परिवार फोटो को आफ्नो संग्रह को शुरुवात एक प्रकारको हुन दिनुहोस्। यसो गर्न, तपाईं नियमित ठूलो एल्बम खरीद गर्नुपर्छ र सुन्दर आफ्नो आवरण हात-सजाउनु। एल्बम कभर गर्ने नवविवाहितहरूका को प्राथमिकताहरू आधारमा कुनै पनि शैली मा सजाया गर्न सकिन्छ। हामी रोमान्टिक जोडी को लागि एक कोमल प्रकाश-रंग एल्बम प्रस्ताव तल।
तपाईं निम्न आवश्यक हुनेछ:
गत्ता कागज सेतो, गुलाबी (वा बैजनी) र पहेंलो रंग;
साटन वा tulle उज्ज्वल रंग रिबन चौडाई मा 2-4 सेमी;
गोंद छडी वा सादा कागज गोंद;
प्वालहरू भएको फोटो लागि एल्बम;
prearranged Monogram संग टिकट।
विनिर्माण एल्बम लागि समेट्छ:
पहिलो, तपाईंले सेतो गत्ता एल्बम को आकार बराबर आयत काट्न गर्न आवश्यक छ। गुलाब वा बैंगनी कट गत्ता आयत510 सेमी र त्यसपछि गत्ता पहेंलो रङ्ग अर्को आयत 2-3 मिमी अघिल्लो एक भन्दा सानो। वा गुलाबी को कुना नजिक र उसलाई पहेंलो केन्द्र मा सेतो आयत लीन।
एल्बममा प्वालहरू मार्फत तल बाट सुरू हुने, रिबन मुद्दा, एक धनुष मा बाँध र एक कोण मा समाप्त ट्रिम। तर यो एल्बम कभर मा अहिलेसम्म छ तयार छ। , गुलाबी पहेँलो र सेतो गत्ता सानो वर्गहरूको बाहिर कटौती नै अनुक्रम केही मिलिमिटरमा तिनीहरूलाई कम, र एक अर्को पहिले नै बक्से चिपके छ को शीर्ष मा टाँस गर्नुहोस्। को टिकट संग माथिल्लो सानो वर्ग सेतो अभिलेख मुद्रण छ। यो केवल नवविवाहितहरूका नाम हुन सक्छ, तर तपाईंले एउटा सानो इच्छा वा दुलही र दुलहा अभिवादन थप्न सक्नुहुन्छ। अब एल्बम कभर चिपके गर्न सकिन्छ। त्यो उपहार "ड्राई" जस्तो छैन, यो इरादा spouses केही फोटोहरू भर्न सम्भव छ।
यो पनि दर्जा "सर्वश्रेष्ठ एल्बम" को एक प्रकारको छ फूल र ruffles संग सजाया एक विकल्प कपडा छ। यो एल्बम धेरै फिक्का र रोचक देखिन्छ।
यसो गर्न, तपाईं निम्न आवश्यक:
सेतो कपास कपडा ;
बेल कपडा सेतो रंग;
स्टेशनरी चक्कु वा कागज लागि कैंची;
सजावटी फूल र रिबन;
कवर क्षेत्र को अगाडि बराबर एक आयत बनानु Sinteponovye। एल्बम यसलाई पेस्ट गर्नुहोस्। आकार कुल आवरण क्षेत्रमा पूर्व-ironed सेतो कपडा कट मोड गर्न प्लस 2cm थप्न परिधि (अगाडि र पछाडिको, पार्श्व पक्ष सहित)। ध्यान दिएर भित्री किनाराको तह द्वारा सामाग्री गर्न टास्ने लागू हुन्छ। आफ्नो पेस्ट द्विपक्षीय टास्ने टेप। माउन्ट माथि बेल कपडा नै सिद्धान्त मा। syntepon देखि 2-3 सेमी द्वारा अघिल्लो एक भन्दा सानो एक आयत बनानु बाहिर। पनि सुरुमा सेतो कपडा (ग / ख), त्यसपछि बेल पेस्ट यसको। कवर को केन्द्र मा परिणामस्वरूप नरम kleite आयत।
फूल र रिबन को एक राम्रो गीत रचना र समाप्त उत्पादन संलग्न गर्नुहोस्। एल्बम को सुरुचिपूर्ण आवरण तयार र यसको प्राप्तकर्ता लागि प्रतीक्षा छ!
आफ्नो हातमा र घर मा काउब्वाय सुट
आफ्नै हात क्रिसमस Topiary गरिरहेको
को टेप को फूल: उपकरण kanzashi
कसरी प्लास्टिक बाहिर कान को बाली बनाउन र रोशनी मा सधैं हुन
Tangram, आफ्नै हातले बनाएको: रमाइलो र इनामदायी शौक
कुखुरा crochet: योजना (फोटो)
कसरी छोडपत्र लागि फाइल: छोडपत्र को आधारभूत नियमहरू
सांस्कृतिक के हो? अन्य विज्ञान संग संचार सांस्कृतिक अध्ययन
को माइक्रोवेव मा स्वादिष्ट meatballs कसरी बनाउने?
कम्प्युटर नै निद्रामा मोड बाहिर किन आउँछ छ?
सपना साँचो आउन र Aleksandry Zaharovoy को जीवनी
झूटा दिमित्री2को हुनुहुन्छ? साँच्चै Falsdmitry नियम2के थियो?
कस्तो कर्कश खुवाउन? एक पिल्ला र एक वयस्क कुकुर Laika खुवाउने
के तपाईं आफ्नो हातले घर इलेक्ट्रनिक गर्न सक्नुहुन्छ?
योर्कशायर टेरियर्स लागि सुक्खा खाना कसरी चयन गर्न
सिस्टम आर्किटेक्ट: प्रशिक्षण, काम विवरण र समीक्षा
महिला मा मूत्र असंयम